Sidee Ayaan Ugu Bixiyay 'Fasaxayga' Xagaaga 'Qasabadaha Jikada, Qasadaha Buuxi Weelka, Qasabada Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sidee Ayaan Ku Bixiyay 'Fasaxii Xagaagii'
2020 / 08 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7739 0
Waxaan taagay weel caag ah oo ka waraabiya jikada dhexdeeda waxaanan shubay tubada, ka dib markii aan maqlay qeylada wiilasheena 4-iyo 2-sano jir, oo mar kale dagaalamaya. Dhawr daqiiqo ka dib waalidnimo heer sare ah, oo aan dhammaantood ku xusuusinayay wanaagga (iyo in feedhkooda nafsaddooda lagu ilaaliyo), wiilkeennii ugu weynaa ayaa xusay, “Mama, ma awoodi kartaa inaad hadalka joojiso? Waxaan u baahanahay inaan wax cunno. ”
Mar labaad jikada gudaheeda, waxaan ogaaday in deg degteyda aan dagaalka u joojinayo, waxaan iska ilaaway inaan muujiyo biyaha. Qasacadda waraabinta, oo ay ku tiirsantahay miiskeeda miiska saaran, ayaa buux dhaafisay. Biyo ayaa yaallay meel kasta oo ka mid ah dhulka jikada iyo xitaa gudaha golaha wasiirada hoosta saxanka.
Aniga oo raadinaya hal shay oo dheeri ah, waxaan ka dhex helay qolka nasashada carruurta. Nadiifinta biyaha, waxaan uriyay hal shay oo ur ah. Aniga oo dhuuqaya meel dhow, Waxaan ogaaday roogga kaadida ka soo baxday. Waxaan u jeestay inaan arko 2-jirkeena oo doonaya inuu si toobad ah u toobad keeno. Halkaas waxaan ahaan jiray, sacabbada iyo jilbaha, waxaan ku nadiifinayaa dhulkeena jikada rooga ay ka buuxaan "pee pee," aniga oo habaarayaa neefta hoostooda oo istaagaya jiffy kasta si aan ugu kiciyo omelet dhalinyarada.
Taasi waxay ahayd bilowgii safarkaygii [faafa] xagaaga, oo farsamo ahaan bilaabmay badhtamihii Juun - ama ku tiirsanayd ciddaad weydiiso - badhtamihii Maarso, ka dib kolkii kuliyado iyo xannaano maalmeed la xidhay.
Xagga jidka, biyuhu waxay ahaayeen hadhuudhka. Sure, hadhuudh, kaas oo aan ka soo kacaynay balakoonka dhismaha la dhisayo ee Pico-Robertson. Toddobaadyo ka hor, waxaan geeyay wiilasha xannaanada carruurta, taas oo ah tan ugu dhow ee aan ku gaari lahayn daarta dambe ee cirifka ah ee cudurkan faafa, ka sokow our barxadda soo jiidashada leh ayaa halkan ku heshay dalagyo dhoobada dhoobada ah iyo wasakh aad u badan oo qaali ah. Iyo beddelka gnome ee daaradda, waxaa jiray xirfadle ku saabsan jirrooyinka fungal dhirta.
Wiilkeena 4-jirka ah wuxuu ku qoslay aragtida qaar ka mid ah laamo leh sawir yar oo galley ah dushiisa. Dhoollacaddaynta wejigiisa ayaa ahayd mid aad u wanaagsan in la iska caabiyo. Ilbidhiqsigaas, waxaan ku barbaaray inaan noqdo beeralay hadhuudhley ah.
Ma wax baan ka ogaa kor u kaca hadhuudhka beerta ku jira balakoonka aan hadhka lahayn? Ma aanan sameyn Si kastaba ha noqotee waxaan iibsaday xoogaa qaali ah, bacrimin dabiici ah, anigoo u maleynaya xayawaanaadka ay ka timid in lagu quudiyay khadka ugu sarreeya, quudinta dabiiciga ah. Waxaan intaa dheer iibsaday wasakh qaali ah. Kali kaligaa Ameerika ma awoodaa in lagaa dhaadhiciyo inaad bixiso hal shay oo aad awoodi doontid inaad qodato dhinaca wadada weyn - goor dambe oo fiidkii ah, iyadoo aysan jirin wax daawadayaal ah.
Si la yaab leh, hadhuudhkii ayaa koray oo in yar ka dib, xariir soo baxday - kuwan dhalaalaya, fiilooyinka la moodo dunta oo u muuqda muruq, timo cad. Waxay ahaayeen ciyaar kufiican timaha cadcad ee kasoo ifbaxay madaxayga bilihii lasoo dhaafay, gaar ahaan tan iyo markii la iigu yeeray sare inaan joojiyo hadalka oo aan cunnada cuno. Isaga oo ilaalinaya, dhowr ka mid ah wicitaanadan ayaa halkan laga helay ninkayga.
Wiilasheenu waxay dareemeen hab lagula xisaabtamo “dalagyadeenii” waxayna iga caawiyeen inaan ku rusheeyo bacriminta gudaha beeraleyda, si kastaba ha noqotee si dhakhso leh, hadhuudhkii - oo aad ugu eg rajadayda ku aaddan ka faa'iideysiga musqusha iyada oo ilmo yar oo ilmahaygu go'aansaday inuu albaabka garaaco - wuu engegay.
Galleyda - aad ugu eg rajada aan ka qabo in musqusha laga faa'iideysto iyadoo socod barad ah albaabka lagu garaacayo - waa engegay.
Aniga oo rajaddaydii xilliga xagaaga beerta ka dhammaatay, waxaan booqday tafaariiqle farshaxanno ah oo ugaarsi ugu jira wax soo jiidan kara dhallinyarada. Toddobaad kasta, waxaan halkan ku imid guryo leh dareemo, seyrar, warqad dhalaalaysa, istikaarro, ulo ubaxyo ah, kuulo iyo indhaha aan ku jeclahay ee googly. Waxyaabaha oo dhan waxay u muuqdaan kuwo ka sarreeya indhaha googly. Iibsigeygii ugu weynaa wuxuu ahaa goob nuuradda lagu lugeeyo, taas oo badbaadisay dhallinta ku mashquulsan nuska-saac maalin kasta.
Hal dhacdo, aniga iyo seygeyga waxaan wiilasha wada raacnay safar labo-saac ah oo nibiriga lagu daawado oo ku taal Newport Seashore. Lalabbo biyaha aan sinnayn, dharkeennii ayay ku soo wada tuureen. Maalin kale, waxaan sahaminay barkado dabbaal oo ku yaal xeebta Rancho Palos Verdes waxaanan suulashayada ku burburinay dhagaxyada jiqda ah oo raadinaya qafisyada doogga. Si kastaba ha noqotee waxay ahayd qiimo sababtoo ah waxaan helay inaan ka faa'iideysto qolka nasashada guud ee bulshada si nabad ah.
Xilligan xagaaga wuxuu ahaa mid cakiran: Waji daboolan inta lagu gudajiray mowjad diirimaad ah, "bannaanka" oo aan ka koobnayn waxba si kastaba ha noqotee sawirro wareeg ah oo ku socda dariiqa, iyo xaaladdayda, walaac-cunid ka walaacsan hal baasto oo midba midka kale ka dambeeya.
Dahaarka qalinka ee xilliga xagaaga ayaa laalaabaya dharka. Waxaan baray qaababkeennii ugu da'da yaraa ee lagu laabo tuwaallada iyo sharaabaadada isku aaddan. Haddii uusan fadhiisan midig si loo baro ABC-yada aniga ila, aan ka yarayn isaga ayaa la bari karaa awoodaha nolosha ee daruuriga ah.
Dhallinyaradu toddobaadkan ayey ku noqdeen dugsiga sare waxaanan dareemayaa jahwareer. In kasta oo aan jeclahay nasashada, haddana waan u xiisay iyaga. Xitaa waan u xiisay dagaalkooda. Waxaan la legdamayaa noocyo kala duwan oo walwal ah oo ku saabsan haddii ay amni ku nagaan karaan guriga iyo in kale, waana ka baqayaa inaan hyperventilate ka dhigo waqtiga ugu horreeya ee dhammaantood yimaado guriga iyagoo hindhisaya.
Waan ogahay inaan sinaba u heli doonin xagaagan markale, waxaana jiray daqiiqado badan oo sixir ah. Taasi waa la xusay, haddii cudurkan faafa uu sii wado xasilloonida xilliga xagaaga, ninkayga wuu ka warqabaa inuu wiilasha ku wargaliyo in "Mama ay in muddo ah magangelyo tagtay."
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa in yar oo horay loo sii fiiriyo. Waxaan u balan qaaday dhalinyarada inaan ku beeri doono bocor dayrta. Marka la eego sida aan ugu ekaa khudradda ugu dambeysa ee aan soo iibsannay, ma sugi karo inaan arko sidaan u ekaan doono isla marka aan beero bocor dufan leh.
Tabby Refael waa qoraa fadhigiisu yahay magaalada Los Angeles, afhayeen iyo dhaqdhaqaaqe.
Hore:: Hoyga hormarinta guryaha Kassy Shimotsu waxay dib u dhisaysaa jikadeeda Next: Westville Bold Classic Jikada naqshadeynta Jonathans